रोनाल्डोलाई एक खेलमा प्रतिबन्ध, यूनाइटेडविरुद्ध मैदान छिर्न पाउने ! - Everest Dainik - News from Nepal
रोनाल्डोलाई एक खेलमा प्रतिबन्ध, यूनाइटेडविरुद्ध मैदान छिर्न पाउने !
एजेन्सी, असोज १२ । इटालियन क्लक युभेन्ट्सका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि च्याम्पियन्स लिगमा एक खेलको प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ। प्रतिबन्ध लाग्नेबारे यूइएफएले बिहीबार जानकारी दिएको हो।
च्याम्पियन्स लिग ग्रुप स्टेजका खेलमा भ्यालेन्सियाका खेलाडीविरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेपछि उनलाई रातो कार्ड देखाइएको थियो। जसका कारण रोनाल्डोमाथि ३ खेल प्रतिबन्ध लाग्ने बताइएको थियो। रेड कार्ड रोनाल्डोको च्याम्पियन्स लिग इतिहासमै पहिलो पटक थियो।
याे पनि पढ्नुस डेटिङमा रहेका रोनाल्डो प्रशिक्षणमा फर्किए
मात्र एक खेलमा प्रतिबन्ध लाग्ने भएपछि अब उनले आफ्ना पूर्व क्लव मानचेस्टर यूनाइटेडविरुद्ध च्याम्पियन्स लिगमा मैदानमा उत्रन पाउनेछन्। सो खेल अक्टोबर २३ तारिख यूनाइटेडको घरेलु मैदानमा हुनेछ। यद्यपी योङ ब्वाइज क्लवसँग हुने खेलमा उनको उपस्थिति हुनेछैन।